Muxey Go’aan ku gaadheen Madax Goboleedyada & Kulanka Midowga Yurub Maxey la shirtagayaan ? – Shabakadda Puntland FM
You are here: Home WARARKA MAANTA Muxey Go’aan ku gaadheen Madax Goboleedyada & Kulanka Midowga Yurub Maxey la shirtagayaan ?
Muxey Go’aan ku gaadheen Madax Goboleedyada & Kulanka Midowga Yurub Maxey la shirtagayaan ?
Posted on July 11, 2018 by admin | 0 Comments
Hogaamiyaasha dawladda gobaleedyada iyo dawladda Faderaalka Soomaaliya ayaa lagu casumay kulan weyne ay iskugu imaanayaan madaxda Midowga Yurub, dalalka daneeya arrimaha Soomaaliya, kaas oo inta uu socdo diiradda lagu saari doono Ammaanka, Siyaasadda iyo dibu dhiska ciidamada Xooga dalka Soomaaliyeed oo ay waxyaabaha ugu badan ee laga hadli doono.
Hogaamiyaasha Soomaalida ayaa la doonayaa in ay la yimaadeen siyaasad mideysan iyo qorshe ku aadan dibu dhiska ciidamada Xooga dalka Soomaaliyeed, waxaana qorshaha ugu weyn ee ay dhinacyadan laga sugayo marka ay tagaan xarunta Midowga Yurub.
U diyaar garowga kulankan heerkiisu sareeyo ayaa laga dareemayaa gudaha dalka, Dhinacyada Soomaalida ayaa shirkii Baydhabo iyo kii Muqdisho ee kahoreeyey ay isku afgarteen qorshaha habraaca dibu dhiska ciidamada xooga dalka iyo qorshaha Ammaanka oo labaduba saldhig u noqon doona kaalmada iyo taageerada Caalamku siiyo Soomaaliya.
Xukuumadda Faderaalka ayaa horey u qorsheysay in ay shirkaas matasho Soomaaliya oo dhan, laakiin si rasmi ah waxaa u diiday Midowga Yurub oo bixinaya dhaqaalaha dib loogu dhisayo ciidamada Soomaalida, waxayna muujinayaan sidda ay lagama maarman u tahay in dhinacyadu ay la yimaadaan hanaan hufan.
Turxaan-bixinta labada qorshe ee Dibu dhiska ciidamada Xooga dalka Soomaaliyeed & qorshaha Ammaanka ee la wareegida masuuliyada AMISOM hayso ayaa ah kuwa ugu waa weyn ee la falanqeyn doono, waxaana dawlad gobaleedyada qaarkood welwel ka qabaan halista amaanka ee bixintaa AMISOM.
Midowga Yurub ayaa 280 Milyan oo dollar ku bixinaya dhismaha laamaha Ammaanka ee dalka, waxaana laga hadlayaa habka ugu wanaagsan ee lagu bixin karro lacagahan, iyadoo ay ku gadaaman yihiin caqabado waa weyn oo ay ka mid yihiin arrimaha AL- Shabaab oo wali ah awood aan la dhaysal Karin.
Daacadnimada in lafuliyo heshiisyadii ay dhinacyada Soomaalidu gaareen bilihii Febuary & June ee sannadkan ayaa ah mid welwel laga qabi karro, maadaama qorshaha Ammaanka uu wali yahay mid dhaawacan oo aan laga gaarin hadafkii laga sugayey.